We Fight We Win. -- " More than Media ": ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအား မြန်မာ့တပ်မတော်မှ မီးရှို့ဖျက်ဆီး။
ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအား မြန်မာ့တပ်မတော်မှ မီးရှို့ဖျက်ဆီး။
ဗန်းမော်ခရိုင်၊ စိန်လုံမြို့နယ်၊ ပန်မှူကျေးရွာ ရှိ (KBC) ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်
၏ (ဒေါက်တာ အိုလာဟန်ဆမ်) အထ်ိမ်းအမှတ် ဘုရားကျောင်း အား မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်
မှ (၁၃.၃.၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင်ဤကဲ့သို့ဝင်ရောက် မွှေနှောက် ၊မီးရှို့ဖျက်ဆီး သွားခဲ့ပြီး
ဘုရားကျောင်းအတွင်းရှိ အသင်းဝင်လူဦးရေ စာရင်း စာအုပ် များကိုလည်း မီးရှို့ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။
ဆောက်ကုလားဂေါတမ မကိုးကွယ်ရင် ဒီအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ် လူမျိုးရေးအရ အုပ်စီးထားပြီး အခုဘာသာရေးအရ စော်ကားရင့်သီးတာ ကဲ... ကေအိုင်အေ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ??? တုံ့ပြန်ဘို့ခွန်အားကောရှိသလား????
ဗမာအစိုး၇အဆက်ဆက်ကိုသစ္စာစောင့်သိခဲ့ရုံ သာမက ယခင်မေမြို့ စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ် တာဝန်းထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးလဖိုင်ခွန်နောင်၇ဲ့ ဘိုးဘေးတွေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ရွာနဲ့ ဘု၇ား ကျောင်းဘဲ..ဗိုလ်မှူးကြီးနဲ့ လည်း 100% ပါတ်သက်ခဲ့တဲ့ဘု၇ားကျောင်းဘဲ..တနေ့ တခြားဗမာလူမျိုး တွေ ကိုနာကျည်းတဲ့ကချင်တွေများလာအောင် တမင်ဖန်တည်းနေကြတာများလား?
ဗမာဆို တွေ့တဲ့နေရာမှာသတ်ကွာ...ဗမာတွေစိတ်ဓါတ်အောက်တန်းကျလွန်းတယ်...လူမဆန်တဲ့ခွေးမျိုးတွေကို ဆန့်ကျင်ကြ...